C/salaan Guuleed "Waxaa jira Ciidamo Soomaaliyeed oo ka qeyb galay dagaalkii Tigray" - Jowhar somali news leader
Home NEWS C/salaan Guuleed “Waxaa jira Ciidamo Soomaaliyeed oo ka qeyb galay dagaalkii Tigray”
C/salaan Guuleed “Waxaa jira Ciidamo Soomaaliyeed oo ka qeyb galay dagaalkii Tigray”
Taliye kuxigeenkii hore ee Nabadsugida C/salaan Guuleed ayaa tilmaamay inuu helay warar isa soo taraya oo sheegaya in Ciidamo Soomaaliyeed oo lagu tababaray dalka Eritrea ay ka qeyb qaateen dagaaladii ka dhacay Gobolka Tigray ee Itoobiya.
Mr Guuleed oo wareysi siiyay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in Ciidamada Soomaalida ee ka barbar dagaalamayay Ciidanka Eritrea ee qeybta ka ahaa dagaalkii lagu qaaday Gobolka Tigray.
“Xiriiro aan la sameeyay meelo kala duwan, waxaan aad uga naxay oo xanuun ah in la sheegayo inay dhinteen boqolaal dhalinyaro ah, ayna dhaawacmeen boqolaal kale oo ciidamo Soomaali ah dagaalkii gobolka Tigray”ayuu yiri C/salaan Guuleed.
Waxaa uu sheegay inay nasiib darro tahay in Ciidan Soomaaliyeed inay ka dagaalamaan dhul aysan laheyn oo gaaraya afar kun dhalinyaro tababar loogu qaaday dalka Eritrea.
Dowladda Soomaaliya ayaa dalka Eritrea u qaaday boqolaal dhalinyaro oo dalkaas lagu soo tababaray, waxaana jiray cabasho waalidiinta dhalinyarada la qaaday ka muujiyeen oo ahaa in aanay war iyo wacaal ka heyn carruurtooda, ayna ugu war dambeysay maalintii tababarka loo qaadayay.
Illaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya arrintaas, maadaama xogta laga heli karay dagaaladii dowladda Itoobiya ku qaaday Gobolka Tigray uu aad u xadidnaa, kaddib markii isgaarsiinta la jaray.
Bishii hore ayay aheyd markii Waaxda Arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay inay hayaan warar lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in boqolaal ka mid ah Ciidamada eritrea oo ka barbar dagaalamaya Ciidanka Itoobiya, waqooyiga Gobolka Tigray.
Previous articleSafiirkii hore ee Mareykanka oo walaac ka muujiyay xaalada Soomaaliya
Next articleFrance begins Covid-19 vaccination for people over 75 years of age